Ahoana ny fametrahana ireo mpamily NVIDIA farany indrindra amin'ny Ubuntu? | Avy amin'ny Linux
Mba hilaza ny marina, raha ny fijeriko azy, Nvidia dia mazàna manome fanampiana bebe kokoa an'ireo singa ao anatiny ho an'ny rafitra Linux izay tsy mitovy amin'ireo mpifaninana aminy, manome fanohanana malalaka kokoa izy. Izany dia satria mbola hitantsika fa maro amin'ireoNy karatra hatramin'ny taona lasa dia mbola havaozina ary manampy fanohanana ireo kinova farany an'ny Xorg.
Ary ity dia efa nohamariniko manokana, satria mpampiasa ATI sy Nvidia aho, saingy tsy izany no anton'ilay olana.
Ny mazava amiko dia izay matetika ireo mpampiasa vaovao dia tsy sahy mametraka mpamily tsy miankina avy any Nvidia noho ny tahotra, eny fa na dia ireo manana traikefa bebe kokoa aza satria matetika izy ireo dia manana olana mahazatra izay ny efijery mainty malaza.
Soa ihany ho an'ny mpampiasa Ubuntu, misy mpamily sary Nvidia ao amin'ny PPA antoko fahatelo izay natokana hitandrina ny mpamily Nvidia ho daty hametrahana.
Ny PPA dia ao anatin'ny dingana fitsapana ankehitriny, saingy mbola afaka mahazo mpamily Nvidia miasa eto ihany ianao.
1 Fametrahana ireo mpamily Nvidia.
2 Ahoana ny fanesorana ireo mpamily Nvidia?
Fametrahana ireo mpamily Nvidia.
Zavatra izay tsy maintsy fantatrao hatrany izay ny kinova farany an'ny mpamily Nvidia azo alaina ho an'ny karatra sary.
Raha tsy azonao antoka ny momba azy ireo dia azonao atao ny mitsidika ny pejy Nvidia izay hijeren'izy ireo ny maodelin'izy ireo ary hisafidianana ny Linux ho rafitra, aorian'izay dia hoentin'izy ireo mankany amin'ny pejy fisintoman'ny binary ary ho hitan'izy ireo any izay ny kinova mpamily farany indrindra ho an'ny sary.
Fantatra ity fampahalalana ity, mila mahazo antoka isika fa manala ireo fametrahana teo aloha Raha misy izany dia tsy maintsy manao ity baiko manaraka ity fotsiny isika momba azy:
Vita ity, izao dia tsy maintsy ampidirintsika ao amin'ny rafitray ny tahiry, noho izany dia tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Manavao ny lisitry ny trano fitahirizana izahay amin'ny:
Raha fantatrao ny kinovan'ny mpamily amin'ny karatrao, asehoy fotsiny ity baiko manaraka ity, ohatra iray fotsiny izy ity:
Raha tsy izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ny menio fampiharana izahay ary hikaroka ny "Rindrambaiko sy fanavaozana ary mpamily fanampiny.
Eto dia hasehony antsika ny lisitry ny mpamily misy, izay ahafahantsika misafidy izay tiantsika, na dia ilay notoroana hevitra aza no matetika be indrindra.
Ankehitriny, ity dia ampahany iray izay zahan'ny tsirairay ary izy no tena antony mahatonga ny lamba mainty, amin'ny faran'ny fametrahana, amin'ny terminal izahay no manatanteraka:
Raha tsy misy output, dia mety tsy nahomby ny fametrahana anao. Azo atao ihany koa fa tsy misy ny mpamily ao amin'ny angona mpamily rafitra.
Azonao atao ny mihazakazaka izao baiko manaraka izao hijerena raha mihazakazaka amin'ny mpamily nouveau open source ny rafitrao.
Raha ratsy ny nouveau ny vokatra dia tsara daholo ny fametrahana anao.
Ankehitriny, matoky ny fametrahana mila atao lisitra mainty ny mpamily maimaimpoana, mba tsy hifanohitra amin'ireo vaovao napetraka.
Mba hamoronana an'ity lisitra mainty ity, hanatanteraka ity baiko manaraka ity izahay:
Ary ao anatiny no hanampianay ireto manaraka ireto.
Amin'ny farany dia tsy maintsy tahirintsika ny fanovana.
Ary vonona hamerina ny solosaina izahay.
Ny antony iray hafa dia ny fametrahana automatique ny fanavaozana ny kinova madinidinika, matetika izany no mitranga rehefa mihazakazaka fanavaozana isika
Mba hisorohana an'io dia ampidiro fotsiny ity baiko manaraka ity, ka raiso fa ity no kinova fototrao.
Ahoana ny fanesorana ireo mpamily Nvidia?
Mila manatanteraka ity baiko manaraka ity fotsiny izahay:
Ary esory ny mpamily Nouveau amin'ny lisitra mainty voalaza etsy ambony ary manatanteraka:
Averina indray fa hisy vokany ny fanovana ary miverina amin'ireo mpamily maimaimpoana indray izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ahoana ny fametrahana ireo mpamily NVIDIA farany indrindra amin'ny Ubuntu?
"Nvidia dia mazàna manome fanampiana bebe kokoa an'ireo singa ao aminy ho an'ny rafitra Linux noho ny, tsy toy ny mpifaninana aminy, manome fanohanana misimisy kokoa izy io."
Ny tsy misy dikany dia ity andianteny ity. Mampatahotra!
Lazao fa ny tsipika sudo add-apt-repository ppa: mpamily sary dia manana toerana fanampiny, tokony ho:
sudo add-apt-repository ppa: mpamily sary
Ary ny tsipika sudo apt-get install nvidia-370 dia tokony hosoloina:
sudo apt-mahazo mametraka nvidia-390
Darkcrizt dia hoy izy:
Salama maraina Lihuen.
Misaotra ny fandinihanao, raha ny tsipika nvidia-370 dia ohatra fotsiny, tsy mitovy ny fitaovana entintsika rehetra ary tsy ny karatra rehetra no manohana ny kinova mpamily farany indrindra.
Valiny tamin'i Darkcrizt
Patxi dia hoy izy:
Nandehandeha tranonkala maro aho nanandrana nametraka ireo mpamily nvidia ary nanana olana maro aho, hitako ihany ity torolàlana ity izay afaka mandeha tanteraka, misaotra anao aho nizara an'ity lesona ity.
Sary gtx 1050 mihazakazaka ao:
Intel core 2 Quad cpu Q9300 processeur
fahatsiarovana 4 modules an'ny 2GB DDR2 800
Mamaly an'i Patxi
pampyyto dia hoy izy:
Salama, voalohany indrindra amin'ny tutorial tsara, ny 10. Nanaraka ny dingana mankany amin'ilay taratasy aho ary rehefa nanatanteraka (nanome ahy ny fivoahan'ny Nvidia, ary rehefa nanatanteraka lsmod | grep nouveau, ny vokatra dia ratsy, fa noho izany dia tsy maintsy natomboka indray aho ny solosaina finday ACER Nitro 5, ho an'ny fametrahana ireo mpamily raha toa ka misy vokany ny nvidia-driver-455)
Manana ny olana aho rehefa mamorona rakitra:
lisitra mainty lbm-nouveau
safidy nouveau modeset = 0
** Eny, rehefa omenao Ctrl + O na Ctrl + X izay hivoahana sy hitehirizana, amin'ny farany dia mila manome ny fidirana ianao, azoko izany: (Diso fanoratana /etc/modprobe.d/blacklist-noveau.conf: Tsy nahazo fahazoan-dàlana.
Misy ve ny vahaolana momba izany? mety tsy maintsy apetrakao mialoha (sudo) nano /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf
Misaotra indrindra azafady, raha afaka manoratra amiko ianao dia tena tiako izany.
Mamaly an'i pampyyto
Akiee: mpitantana asa any Markdown
Hita izao ny kanelina 3.8 miaraka amin'ny fanohanan'ny Python 3